I-Makówka - imfihlo epheleleyo kunye nokuthula - I-Airbnb
I-Makówka - imfihlo epheleleyo kunye nokuthula
Kobylniki, Świętokrzyskie, Poland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMalgorzata
Sinikezela kuwe ngendlu yethu yasefama ethandekayo, ehlaziyiweyo. Ime kwindawo ezolileyo kude nelali enkulu. I-cottage ime kwibala elikhulu lee-ares ezingama-34 (ibiyelwe ngokuyinxenye). Kwiploti uya kufumana i-nook eneziqhamo zeziqhamo (i-raspberries, i-currants) kunye ne-grove.
Iindwendwe zinalo indawo yokosa inyama, i-hammock, izitulo zedekhi, ifenitshala yegadi kunye neebhayisekile ezi-3. Indlu ilungele izilwanyana zasekhaya.
Umtsalane welali yaseKielce uya kukuqinisekisa ukuba uphumle kwaye uphumle kude nesiphithiphithi sesixeko, kunye nemfihlo epheleleyo.
Indawo enikezelwayo iyahlukaniswa ngokutshona kwelanga okumangalisayo kwaye - ngenxa yokuba izibane ziphuma ngo-11pm - isibhakabhaka esimangalisayo esineenkwenkwezi (kuyafaneleka ukuthatha i-telescope).
Iploti ikwinqanaba, igcinwe kakuhle kwaye imema abantwana ukuba badlale, ingaba yindawo evaliweyo yezilwanyana okanye indawo yokudlala imidlalo yebhola. Kukho indlu kwizakhiwo zayo - ekwiindwendwe, kunye nesakhiwo sasefama - esisebenza njengendawo yokwenza amaplanga kunye neshedi yeebhayisekile.
Indlu yethu iquka: amagumbi ama-2 (kuquka igumbi lokudibanisa elinye), ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela (ishawa, isinki, indlu yangasese kunye nomatshini wokuhlamba).
Ngeentsuku ezipholileyo, unokuphumla ngaseziko kwaye ufunde iincwadi.
Idolophu ekufutshane (yokuthenga) - iSkalbmierz, ikumgama oziikhilomitha ezi-6.
Indawo ekuyo indlu yethu imema ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile okanye ukuphumla okumileyo kwindawo eluhlaza.
Kubantu abathanda uhambo losuku olu-1, sicebisa uhambo oluya:
Umqolomba weRaj, amabhodlo eNqaba eChecinach - iikhilomitha ezingama-80 ukusuka kwindawo yethu
Iintaba ze-Świętokrzyskie (Łysa Góra) - 90 km
Imithombo yokufudumala eSolec-Zdrój - i-40 km
Ihlathi (Zagaje Stradomskie) - 15 km,
Iqula lokuqubha langaphakathi - 8 km
Ulwandle lwesiXeko kwiLagoon eKazimiezra Wielka kunye neSkalbmierz - 8km / 6km
Krakow - 50 km
Umbuki zindwendwe ngu- Malgorzata
Nceda uqhagamshelane nathi ngefowuni.